Soosaarayaasha Laydhka ee loo yaqaan 'UVB Lamps' - Shiinaha Shiinaha Bixiyeyaasha Laydhka Wejiga & Warshadaha
Wax soo saarkii Sare ee UVB Fuluubka Laambad
Magaca Soosaarka Sare ee Wax Soo Saarka Sare ee UVB Fuluubka Laambada Cabbirka Cad ee 5.5 * 17cm Waxyaabaha Cad ee Quartz Glass Model ND-19 Muuqaalka Isticmaalka muraayadda “quartz” ee loogu talagalay gudbinta UVB waxay fududeysaa galinta wejiga UVB. Daboolka laydhku wuu dhumuc dheer yahay oo leh shey-caddeyn leh hawo-mareenka. Afar tuubbo wareeg ah oo ballaaran oo wareegsan, qaab qurux badan leh, goob muuqaal ah oo ballaaran. 26W awood sare. Hordhac Laydhka badbaadinta tamarta ee loo yaqaan 'UVB lamp' wuxuu ku yimaadaa moodallo 5.0 iyo 10.0 ah. 5.0 oo ku habboon xayawaannada roobka ku da'ay ee ku nool ...
Nadiifinta tamarta yar ee UVB
Magaca Badeecada yar ee korantada UVB laambada Cayminta Midabka 4.5 * 13cm Waxyaabaha Cad ee Quartz Glass Model ND-18 Muuqaalka Isticmaalka muraayadda “quartz” ee loogu talagalay gudbinta UVB waxay fududeysaa galinta wejiga UVB. Daboolka laydhku wuu dhumuc dheer yahay oo leh shey-caddeyn leh hawo-mareenka. Afar tuubbo wareeg ah oo ballaaran oo wareegsan, qaab qurux badan leh, goob muuqaal ah oo ballaaran. Hordhac Laydhka badbaadinta tamarta ee loo yaqaan 'UVB lamp' wuxuu ku yimaadaa moodallo 5.0 iyo 10.0 ah. 5.0 oo ku habboon xayawaannada roobka ku da'ay ee ku nool aagagga aan dabiiciga ahayn ...
Magaca Badeecada Gaarka ah ee loo yaqaan 'UVB tube' Midabka 45 * 2.5cm Cad cad ee Quartz Glass Model ND-12 Muuqaalka Isticmaalka galaaska "quartz" ee loogu talagalay gudbinta UVB wuxuu fududeynayaa galitaanka wejiga UVB. Waxay leedahay aagagga ay ka badan tahay laambadda UVB. 15W awood hoose, tamar badan iyo ilaalin bey'ada. Hordhac Tuubbada wax badbaadisa ee UVB waxay ku timaadaa 5.0 iyo 10.0 moodel. 5.0 oo ku habboon xayawaannada roobku ku da'aan ee ku nool aagagga aan dabiiciga ahayn iyo 10.0 oo ku habboon xoolaha lammaanaha ah ee ku nool i ...
Magaca sheyga weyn ee loo yaqaan UVB3.0 Nooca midabka 6 * 7.5cm Qalabka Qalinka GLASS Model ND-11 Feature 25W iyo 50W xulashooyinka. Nalalka muuqaalka buuxa, oo bixiya labadaba UVA iyo UVB. Kuleyl aad u sareeya, nugul iftiin daciif ah. Habboon oo ku habboon cayn kasta oo ah waxyaalaha buuran iyo qoolleyda. Hordhac Iftiinka UVB wuxuu ka kooban yahay 97% tamarta kuleylka UVA si uu uga caawiyo dheefshiidka cuntada, iyo 3% UVB UV waxay xoojineysaa nuugista kalsiyum, taasoo gacan ka geysaneysa in xayawaanku si caafimaad leh u koraan, ugana hortagaan ugana hormariyaan lafaha lafta, ...
Magaca sheyga yar ee UVB3.0 Cayimida Midabka 4.8 * 5cm Qalin Qalabka GLASS Model ND-10 Feature 25W, 50W iyo 75W xulasho. Nalalka muuqaalka buuxa, oo bixiya labadaba UVA iyo UVB. Kuleylka hooseeya, iftiinka xoogan. Hordhac Nalalka UVB wuxuu ka kooban yahay 97% tamarta kuleylka UVA si uu uga caawiyo dheefshiidka cunada, iyo 3% UVB UV waxay xoojineysaa nuugista kalsiyum, taas oo ka caawin karta in xayawaanku ay si caafimaad leh u koraan, ugana hortagaan ugana hormariyaan lafaha lafta, jilicsanaanta qolofta iyo ifafaale kale.
Nadiifinta tamarta UVB laambad
Magaca badeecad-Tamarta UVB nalka Caddaynta Midabka 6 * 13cm Qalabka Cad ee Quartz Glass Model ND-09 Muuqaalka Isticmaalka muraayadda “quartz” ee loogu talagalay gudbinta UVB waxay fududeysaa galinta wejiga UVB. Awood yar, badbaadin tamar badan iyo ilaalin bay’adeed. Hordhac Laydhka badbaadinta tamarta ee loo yaqaan 'UVB lamp' wuxuu ku yimaadaa moodallo 5.0 iyo 10.0 ah. 5.0 oo ku habboon xayawaannada roobku ku da'aan ee ku nool aagagga hoostiisa iyo 10.0 ku habboon xoolaha lamadegaanka ah ee ku nool aagagga kuleylaha ah. Soo bandhigida 4 -...